WARBIXIN: 4 Arin Oo Ay Tahay In Ay Barcelona Samayso Si Ay Sevilla Uga Gaadho Guul Soo Laabasho Leh Kulanka Caawa. – Kooxda.com
HomeLa LigaWARBIXIN: 4 Arin Oo Ay Tahay In Ay Barcelona Samayso Si Ay Sevilla Uga Gaadho Guul Soo Laabasho Leh Kulanka Caawa.
March 3, 2021 Abdiwali Adan Jamac La Liga, Wararka Maanta, Warbixino 0
Kooxda Barcelona ayaa marti galin doonta Sevilla kulan adag oo ka tirsan lugta 2-aad ee Semi-finalka tartanka Copa Del Rey-ga iyada oo Barcelona isha ku hayso in ay ka soo laabato guuldaradii lugtii hore ee 2/0 ahayd.
Kooxda Barcelona ayaa kulanka soo galaya iyaga oo ku jira kalsooni kadib markii ay 2/0 ku garaaceen Sevilla kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka La Liga.
Si kasta ha ahataee waxa adkaan doonta in ay Barcelona dhanka kale u rogto natiijada hadii ayna soo bandhigin qaab ciyaareed cajiib ah waliba meelo badan ka fiicnaan.
Hadaba warbixintan waxa aan ku soo bandhigi doonaa 4 arin oo ay tahay in ay Barcelona samayso kulanka caawa hadii ay doonayso in ay guul soo laabasho leh ka gaadho Sevilla.
1.In Ay Ka Faa’iidaystaan fursadaha Ay Helaan:
Barcelona ayaa kulanka caawa u baahan nasiib aad u badan gaar ahaan in ay doonayaan in ay dhaliyaan gool wakhti hore ah taas oo la macno ah in ay Barcelona si fiican uga faa’iidaysato fursadaha ay helaan hadii ay doonayaan in ay dhanka kale u rogaan natiijada.
2.In Ay Cadaadis Saaraan ciyaarta Sevilla:
Guul soo laabasho leh ma dhici doonto in ay kooxda doonaysa in ay soo laabato soo bandhigto qaab ciyaareed cajiib ah waana waxa ay tahay in ay Barcelona samayso.
Hadii ay Sevilla soo bandhigto qaab ciyaareed hooseeya waa in ay Barcelona ka faa’iidaysato waxana ay arintaas ka caawin kartaa in ay gaadho guul soo laabasho leh.
3.In Ay Qaataan Go’aano Sax ah:
Tababare Ronald Koeman ayuu hor yaalaa go’aan ah in uu ciyaarta ku gali doono iska shaxdii kulankii Sabtidii uu kaga badiyay Sevilla isaga oo 5 difaac ah ku ciyaaray ama in uu badali doono kuna soo gali doono shac cusub.
4.In Ay Ka Fogaadaan Samaynta Khaladaadka:
Hadii ay Barcelona doonayso in ay badbaadiso xilli ciyaareedka waliba guul ka gaadho kulankan waa in ay iska ilaaliso khaladaadka badan hadii ay tahay dhanka weerarka ma dhanka difaaca maadama hadii ay sameeyaan khaladaad badan ay Sevilla ka faa’iidaysan doonto waliba dili doonto ciyaarta.